सामूहिक हत्याकाण्डको पीडा बिर्सेनन् गाउँलेले, अझै रित्तै छन् २ घर – Nepali online news portal
सामूहिक हत्याकाण्डको पीडा बिर्सेनन् गाउँलेले, अझै रित्तै छन् २ घर
७ जेष्ठ २०७७, बुधबार १२:५१ May 20, 2020 पाथिभरा संवाददाता
फिदिम– पाँचथरको मिक्लाजुङ गाउँपालिका–३ आरुबोटेमा दुई परिवारका नौ जनाको सामूहिक हत्याको एक वर्ष पूरा भएको छ । गत वर्ष जेठको ७ गते बिहान स्थानीयवासीले यहाँका बमबहादुर फियाक र धनराज शेर्माको परिवारका नौ जनालाई धारिलो हतियार प्रहार गरी हत्या गरिएको अवस्थामा फेला पारेका थिए ।
अत्यासलाग्दो अवस्थामा उनीहरूले रात बिताए । गाउँमै रात बिताएकी अर्की छिमेकी सुनकान्छी फियाक बिहान घर आइन् । बमबहादुरको घरमा कोही नउठेपछि खोज्दै पुगिन् । बमबहादुरको घरको नजिकै कान्छीमाया र सुनकान्छीको घर छ । घरको सिकुवामा बमबहादुरको विभत्स हत्या भएको अवस्थामा शव भेटेपछि उनी अत्तालिइन् । घरमाथिको डाँडामा निस्किएर चिच्याइन् । गाउँहरू भेला भए । कान्छीमाया पनि गाउँलेको आवाज सुनेपछि घर बाहिर निस्किइन् ।
यो घटना गाउँ, जिल्ला हुँदै देशभर फैलियो । विभत्स र अमानवीय उक्त सामूहिक हत्याकाण्डले सबैको ध्यान तानेको थियो । गत वर्षको जेठ ६ गते राति भएको घटनामा ७४ वर्षीय बमबहादुर फियाकसहित उनकी पत्नी ७१ वर्षीया फुर्चीमाया फियाक, कान्छी छोरी २६ वर्षीया मनकुमारी फियाक र नातिनी (साइली छोरीकी छोरी) १० वर्षीया आशिका खजुमको हत्या भएको थियो । आशिकाकी दिदी सीता भागेर बाँच्न सफल भएकी थिइन् । सीता अहिले प्रदेश सरकारको संरक्षणमा सुनसरीमा बसेर पढ्दैछिन् । यस्तै बमबहादुरका ज्वाइँ ४१ वर्षीय धनराज शेर्माको घरमा उनीसहित उनकी पत्नी २६ वर्षीया जस्मिता फियाक (शेर्मा), उनीहरूका छोरी १२ वर्षीया युहाना शेर्मा र १० वर्षीया मुना शेर्मा तथा भतिजी आठ वर्षीया इच्छा शेर्माको हत्या भएको थियो ।
उक्त घटनाको फाइल अझै पनि बन्द भएको छैन । “सबै प्रमाणहरूले आत्महत्या गर्ने व्यक्ति नै दोषी हो भन्ने निष्कर्षमा प्रहरी पुगेको छ”, जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाँचथरका प्रहरी नायब उपरीक्षक सिद्धराज न्यौपानेले भने । उक्त घटनापछि आरुबोटेमै प्रहरीको अस्थायी चौकी बसेको छ । “स्थानीयवासीको त्रास न्यूनीकरण गर्न प्रहरी राख्नैपर्ने भयो । घटनास्थलको नजिकै वडा कार्यालय र केही पर विद्यालय रहेकाले प्रहरी चौकी स्थापना गरिएको हो”, प्रनाउ न्यौपानेले भने ।
वडाध्यक्ष हस्तराज फियाकका अनुसार गाउँलेहरूले उक्त घटनाबारे दैनिक कुराकानी गरिरहेका हुन्छन् । “गाउँको केन्द्र भागजस्तो स्थानमा यो ह्दयविदारक घटना भयो । गाउँलेहरू धेरै समय त त्रासमै बसे । अहिले जनजीवन सामान्य भए पनि दैनिक कुराकानी गर्छन्”, वडाध्यक्ष फियाकले भने । “एक त यस्तो सोच्नै नसकिने घटना भयो । एकै व्यक्तिबाट नौ जनाको हत्या भयो । दोस्रो बमबहादुर र धनराजका परिवार आफैँमा अलग र गाउँलेको आँखामा नबिझाउने थिए । यसैले गाउँले सधैँ सम्झन्छन्” वडाध्यक्ष फियाकले थपे । धनराजको घर वडा कार्यालय तथा आरुबोटे बजारकै छेउमा भएकाले पनि सबैले देख्ने र सम्झने गरेको स्थानीयवासीको भनाइ छ ।
अहिले गाउँमै प्रहरी बसेकाले गाउँलेहरू असुरक्षित महसुस भने गर्दैनन् । तर मानबहादुर एक्लैले सबैको हत्या गरे वा गरेनन् भन्ने कुरामा गाउँलेहरूबीच एकमत छैन । “धेरै कुरा आउँछन् । प्रहरीले आश्वस्त पार्न पनि सकेको छैन”, वडाध्यक्ष फियाकले भने । उक्त घटनाको फाइल बन्द नभएकाले घटनाबारे प्रहरीले सार्वजनिकरूपमा केही भन्न नसक्ने प्रनाउ न्यौपानेको भनाइ छ । “घटनाका थप प्रमाण प्राप्त हुन सक्छन्, यसैले सार्वजनिकरूपमा केही भन्न त सकिएन । तर हाम्रो निचोड भनेको त्यही झुण्डिएर मर्ने व्यक्तिले घटना घटाएको हो”, प्रनाउ न्यौपानेले भने, “थप केही कुरा आए सार्वजनिक गरिहाल्छौँ । त्रास नहोस् भनेरै प्रहरी चौकी स्थापना गरिएको हो ।”
वैदेशिक रोजगार ठगीबाट युवा झनै पीडित
भ्रष्टाचार गर्ने मुलुकको १२२औँ स्थानमा नेपाल
आहा ! सोदु पोखरी
चितवनका किसानलाई गाँजा रोप्ने चटारो, यसरी गरिन्छ गाँजा खेती !
भारतमा २४ घन्टायता अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढी संक्रमित, ३ हजार बढीको मृत्यु
अध्यावधिक नक्सा : स्वाधिनताको पक्षमा ऐतिहासिक कदम